Ukuphupha ngokulahleka kweenwele Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Kwiinkcubeko ezininzi, ukulungiswa kakuhle kunye neenwele ezipheleleyo kuthathwa njengophawu lomtsalane. Ukuze baphile ngokuvisisana nesi sihle sobuhle, uninzi lwabantu luhlawula kakhulu ukhathalelo lweenwele.
Abacwangcisi iinwele basika, umbala kunye nokhathalelo lweenwele kwaye kukho iintlobo ngeentlobo zeemveliso zekhaya ezivenkileni. Ukuba kukho ukulahleka kweenwele okanye ezinxulumene nesifo kunye nenkqayi eyonyukayo, le yingxaki kubantu abaninzi edibene nonyango kunye namayeza. Abanye abantu bazama ngelize ukugubungela umphezulu weenwele ezicothayo ngenxalenye enzulu; ezinye iinwele zikama nje kwiindawo ezinempandla.
Ukuba akukho nto isebenza, ukufakelwa kweenwele okanye iwigi ngamanye amaxesha kuthathwa njengezisombululo. Intloko ephakathi okanye epheleleyo ye-bald ijongeka intle kwabanye abantu, kwaye ukutshintshwa kweenwele akusoloko kuyimfuneko. Namhlanje kukwakho nezisombululo zokuba "uthotho lweenwele oluhle" kunye nezikhewu ezinweleni, ezinje ngeenwele ezingezizo ezivela kwitoti yokutshiza.
Nokuba umntu uyathanda ukulandela le nto okanye hayi, kufanele kushiywe kuye ngamnye. Into ebaluleke kakhulu kwinxalenye yokuzithemba kwabanye ayibalulekanga kwabanye. Emva kwayo yonke loo nto, ayizonwele ezenza umntu ukuba abe yintoni, kodwa ngamaxabiso abo angaphakathi.
Ukulahleka kweenwele luphawu kuphando lwamaphupha, olwenzeka rhoqo, ukuphupha ngamava, mhlawumbi kuyothusa, ialopecia, igama lonyango lokulahlekelwa likhaya, elijamelana nokulala kwaye ngamanye amaxesha lixhalabile ngokusisigxina. Kodwa gcinani engqondweni ukuba yonke imifanekiso yamaphupha evela kumava ephupha kufuneka ihlale ithathelwa ingqalelo kutoliko. Imiba emibi yelinye isimboli inokuncitshiswa yimibutho efanelekileyo yomnye.
Ukuze uqonde ngcono kwaye utolike iphupha lakho lokulahleka kweenwele, sichaze ezona meko zixhaphakileyo ezinxulumene nokulahleka kweenwele ephupheni kula macandelo alandelayo.
1 Uphawu lwephupha «ukulahleka kweenwele»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Abantu abaneenwele eziwayo ephupheni.
1.1.1 Uphupha ukuba iinwele zeqabane lakho ziyawa
1.1.2 Nceda, iinwele zonyana wam ziyawa ephupheni!
1.2 Zomelele kangakanani iinwele ephupheni?
1.2.1 Ubunzima bokulahleka kweenwele: Ngaba luphawu oluxhalabisayo?
1.2.2 Uphupha ngokulahleka kweenwele ngokukrakra
1.3 Intloko yenkqayi ephupheni: akukho nwele entlokweni
1.4 "Umhlaza wokulahleka kweenwele" - intsingiselo yesimboli yephupha
2 Uphawu lwephupha «ukulahleka kweenwele» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ukulahleka kweenwele» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ukulahleka kweenwele» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukulahleka kweenwele»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Abantu abaneenwele eziwayo ephupheni.
Uphupha ukuba iinwele zeqabane lakho ziyawa
Ukuba uphupha ngokulahleka kweenwele kwiqabane lakho, inokuba luphawu lokungqubana okunokwenzeka kubudlelwane. Kodwa umntu ophuphayo makangoyiki. Mhlawumbi sele ibonwa kwangaphambili apho iingxabano zinokusongela khona. Ke iphupha linokuzama kwangaphambili ukuba lingavumeli ukuba lifike kwingxabano kwasekuqaleni.
Nceda, iinwele zonyana wam ziyawa ephupheni!
Ukulahleka kweenwele kumntwana wakho kunokuba ngamava aphupha aphazamisayo. Isifo sinokusondela, kodwa singenabungozi. Ukuba unyana okanye intombi yakho iphulukana neenwele zabo, banokuziva bexinezelekile okanye bekhathazekile esikolweni. Ingxoxo ecacileyo iya kunceda apha.
Zomelele kangakanani iinwele ephupheni?
Ubunzima bokulahleka kweenwele: Ngaba luphawu oluxhalabisayo?
Ukuba iinwele ziwela kwimitya ephupheni, oku ayisosizathu sothuko. Lo mfanekiso unjengephupha ubonakalisa xa uphupha inkqubo yokuguga yendalo, eyenzeka ngokuthe ngcembe. Nangona kunjalo, oku kuhlala kuhamba noloyiko lokulahleka, olunokunxulumana nobudlelwane bobuqu kunye nemicimbi yezemali. Umphuphi kufuneka aqonde ukwaluphala njengenxalenye eqhelekileyo yobomi.
Uphupha ngokulahleka kweenwele ngokukrakra
Ukulahleka kweenwele kakhulu kubonisa umntu ophuphayo ukuba amandla akhe abalulekileyo anokuncipha. Mhlawumbi uziva uxakekile emsebenzini okanye udlula kwinqanaba loxinzelelo. Abaphuphi kufuneka bazivumele ikhefu elincinci lokuhlaziya iibhetri zabo.
Intloko yenkqayi ephupheni: akukho nwele entlokweni
Ukuba iinwele sele ziphume ngamandla ephupheni kushiyeke intloko enempandla, iphupha elo ekuqaleni lingawoyika. Intloko ye-bald inokuchazwa ngokuchanekileyo nangokubi kuphando lwamaphupha. Kwelinye icala, ilumkisa umphuphi ngokuchasene nobuyatha kunye nokuzama ukukhohlisa, kwelinye icala, ikwabonisa ubulumko kunye nempumelelo. Ukuchazwa ngokuchanekileyo kwalo mfuziselo wephupha kuxhomekeke ikakhulu kubomi bephupha.
"Umhlaza wokulahleka kweenwele" - intsingiselo yesimboli yephupha
Ukuba uphuphe ilahleko yeenwele ngokunxulumene nomhlaza okanye ithumba entloko, kufuneka uqale uhlale uzolile. Amava ephupha awaxeli kwangaphambili ukuba umntu ophuphayo uya kuba nomhlaza kungekudala. Endaweni yoko, ibonisa uloyiko oluthile olukhoyo kwi-subconscious yephupha kwaye lubonakala kuphela ephupheni. Ukuthetha nomhlobo olungileyo ngokuqinisekileyo kuya kukunceda usebenze ngezi mvakalelo.
Uphawu lwephupha «ukulahleka kweenwele» - ukutolikwa ngokubanzi
Zombini ku el mundo Ekuvukeni njengasemaphupheni, ukulahleka kweenwele luphawu olubi. Emva kwayo yonke loo nto, iinwele ekuchazeni amaphupha luphawu lwempilo, amandla, ukomelela kunye namandla. Ukuba oku kuyasilela ephupheni, uphando lwangoku lwamaphupha luyakutolika oku njengomkhondo kwikamva. amaxesha oxinzelelo.
Ngamanye amaxesha lo mfanekiso wamaphupha ukwasebenza njengesibhengezo somngcwabo okufuphi, kodwa oku akuyomfuneko ukuba kuyinyani. Kwakhona, ukulahleka kweenwele kunokuba ngumqondiso wesilumkiso sokuninzi Uxinzelelo zibonwe emsebenzini nakubomi bemihla ngemihla. Kusekho ukutolika okuqinisekileyo, kuba ukulahleka kweenwele kunokuthetha ukuba amaphupha aya kuhlala esencinci ebudaleni.
Ukuba owasetyhini amaphupha okulahleka kweenwele, oku kuhlala kubangelwa luloyiko lokuphulukana nomtsalane kunye nemvakalelo yoku Ukugqithisa. Ukuba amabala anempandla abonwa entlokweni yakho ephupheni, kuya kufuneka ufumane umvuzo. Ucoceko lweenwele oluhle lubhengeza ukukhathazeka kunye nezifo.
Ephupheni lomntu, ukuqala kwempandla ngaphezu kwako konke kubonakalisa uloyiko lokuphulukana namandla akhe; Oku akuthethi ukuba ixhala lilungile, nangona kunjalo, uhlala ephupheni ngokungazi ephupheni lakho. Nangona kunjalo, ukuba iinwele zichetyiwe zaze zafikelela kwinkqayi ngelixa uleleyo, enye into iyasebenza - ungafumanisa ukuba yintoni le ikweli nqaku liphawu 'lokucheba'.
Uphawu lwephupha «ukulahleka kweenwele» - ukutolikwa kwengqondo
Kwingcaciso yengqondo yamaphupha, iinwele zihlala zibonakalisa impilo yomzimba kunye nengqondo yephupha. Abafazi kunye namadoda aboyikayo imbonakalo yenkqayi okanye ukukhula kweendawo ezinkulu ezinweleni baya kuphupha ngokulahleka kweenwele. Inkqubo yokwaluphala bajongane.
Elidala iphupha, ngokufuthi nangakumbi nangakumbi ngamandla amaphupha okulahleka kweenwele anamava; emva kwayo yonke loo nto, ukuguga kuyaqhubeka ngakumbi nangakumbi. Apha uloyiko lwelahleko lusasazekile, kuba umntu ochaphazelekayo ngokungathandabuzekiyo ulahla iinwele zakhe; Iindawo ezinempandla zinokugcwaliswa kuphela ngezixhobo.
Imvakalelo yolutsha elahlekileyo nayo inokuhamba nayo. Ukuba ufumana amaxhala kunye neenkxalabo ezinjalo, jolisa ngakumbi kwezona zinto zibalulekileyo ebomini. Sukuxakekiswa yimicimbi engenakunqandwa ekuqaleni; oku kubandakanya ukulahleka kweenwele kwimfuza okanye isifo.
Bonakalisa iinwele ubudoda kunye amandla ibalulekile. I-psychoanalyst Sigmund Freud yababona njengophawu lwesibini lwesini olunentsingiselo yesini. Ngenxa yoko, amaphupha eenwele ahlala ebonisa inkcubeko yomntu kwaye abonakalisa imeko yengqondo yamaphupha. Ke ukuba uphupha ngokulahleka kweenwele, oko kuthetha ukuba, ngengqondo kaFreudian, ukhathalela ezakho iimvakalelo kunye nomphefumlo wakho kwaye uzigcina "usempilweni." Nika ingqalelo kwintlalontle yakho kwaye uqiniseke ukuba usemgangathweni rhoqo ngangokunokwenzeka.
Ukulahleka kweenwele ephupheni kukwatolikwa njengophawu olubi kutoliko lwengqondo ngephupha. Ke olu phawu lwephupha lusebenza njenge isilumkiso Phambi kwelahleko kwihlabathi elivukayo okanye imele uloyiko lokuphulukana nobuthongo. Umzekelo, zibuze ukuba uyoyika ukuphulukana nomntu omthandayo kwaye usebenze kolo loyiko.
Uphawu lwephupha «ukulahleka kweenwele» - ukutolika kokomoya
Kuba ekutolikeni ngokwasemoyeni iinwele zibonwa njengezihombiso zendalo zendoda nanjengesikhuselo somfazi, ukuwa ngenxa yokulahleka kweenwele kubalulekile. ilahleko yi yemvelo.